Xilhayaha xafiiska wadasinnaanta ayaa macluumaad uruurin ka samaynaya dadka leh jinsiyada afrikaanka ee loo gaystay cunsuriyad - News - Yhdenvertaisuusvaltuutettu
Xilhayaha xafiiska wadasinnaanta ayaa macluumaad uruurin ka samaynaya dadka leh jinsiyada afrikaanka ee loo gaystay cunsuriyad
Sanadkii 2018 ayaa xafiiska cadaalada aasaasiga ( FRA ) ee EU:da uu soo saaray baaritaan ku magac baxay being black in the EU. Baaritaankaas oo ka mid ahaa kuwo hore loo sameeyey oo ku magac baxayey EU-midis II. Baaritaanadaasi waxa ay ka faaloonayeen 5.tii sanno ee ugu danbeysay midabtakoorka iyo cunsuriyadaynta lagu hayey dadka leh jinsiyada afrikaanka ee ku dhaqan wadamada Yurubta. Dadka Finland ku nool boqolkiiba 63 qof ayaa baarintaanka ku cadeeyey in loo gaystay cunsuriyad ama midabtakoor. Tusaale ahaan Iswiiden iyo Denmark boqolkiiba 41 qof ayaa sheegay in la cunsuriyadeeyey, xagga dadka jinsiyada afrikaan leh ee ku nool wadanka ingiriiska sheegeen in boqolkiiba 21 qof la cunsuriyadeeyo. Waxa baaritaanka ka qayb qaatay 12 wadan oo EU:da kamid ah oo marka la xisaabiyo dhexdhexaad ahaan oo laysku daro wadamada oo dhan, cunsuriyadayn waxa sheegtay boqolkiiba 30 qof, taas oo ay ku cadahay in Finland ay aad uga cunsuriyad badantahay wadamada kale ee EU:da. Hadii aan nahay xilhayahaasha xafiiska wadasinnaanta, ma nala soo gaadhsiiyo dhibka ama cunsuriyada loo gaysto dadka leh jinsiyada afrikaanka. Dacwado badan ayaan hore u sii gudbinay, laakiin dacwadaha dadka jinsiyada afrikaan leh, waa faro ku tiris. Sidaa darteed ayuu xilhayaha xafiiska wadasinnaantu u samaynayaa macluumaad uruurinta ku saabsan cunsuriyadaynta iyo sababaha kalifay in la soo sheegi waayo.
- Baaritaanka iyo warbixinta ay FRA sameeysay ayaa cadaynaya in dadka leh jinsiyada afrikaanka ee Finland ku nool lagu hayo cunsuriyad aad u wayn, taas oo saamayn wayn ku leh noloshooda iyo horumarkoodaba. Waxa aan macluumaad uruurintan u samaynaynaa in aan ka gun gaadhno sababaha keenaya cunsuruyadaynta iyo dhibaatoonyinka cunsuriyaddu leedahay, waxa aan sidoo kale doonaynaa in aan fahanno cunsuriyadda salka dheer leh ee keentay horistaaga iyo horumarka dadka jinsiyada afrikaan leh ee dhibkaasi haysto iyo sidii looga hor tagi lahaa. Xilhayaha xafiiska wadasinnaanta Kirsi Pimiä ayaa sheegtay in cunsuriyadda salka dheer lehi hor istaag wayn u keeni karto wadasinnaanta nolosha ummadaha laga badan yahay ee wadanka ku nool.
- Macnaha macluumaad uruurintan ayaa ku saabsan in la ogaado cunsuriyadda lagu hayo dadka jinsiyadda afrikaanka leh iyo sababaha ay u soo wargelin waayaan xilhayaha xafiiska wadasinnaanta ama xafiis-dowladeedka kale. Waxa aad u haboon in baaritaano rasmi ah la sameeyo oo lagu xaqiijio arimahaas oo kadibna la fahmo dhibka jira. Kirsi Pimiä ayaa hadelkeedii ku soo koobtay sidaas.
Waa maxay cunsuriyaddu?
Cunsuriyaddu waxa waaye, marka dadka la kala sooco ama si kala duwan loola dhaqamo. Hadii qofka loo arko in uu ka tirsan yahay dadka laga tirada badan yahay oo sidaa darteed lagu cunsiriyadeeyo, tusaale ahaan diintiisa, dhaqankiisa ama qaab galmeedkiisa. Xilhayaha xafiiska wadasinnaanta yaa sheegaya in aan qofna loo cunsuriyadayn karin tusaale ahaan da’diisa, jinsiyadiisa, wadnakiisa, luuqadiisa, diintiisa, qaab fikirkiisa, qaab fikirkiisa siyaasadeed, dhinaca waxqabadka u-doodaha shaqaalaha, dhinaca qoyska, caafimaadkiisa, lixaad la’aantiisa, qaab galmeedkiisa ama wax kale oo kuwaas u dhigma. Cunsuriyaddu waa mabnuuc markasta, ama ha ahaato qof dhib haysata ama ha qusayso qof kale oo wax lagu tuhmayo. Cunsuriyadayntu waxa ay noqon kartaa, tusaale ahaan, marka qofku la saaxiibo, qof ka mid ah dadka laga tirada badan yahay oo saaxiibtinimodiisaa darteed loo cunsuriyadeeyo. Waxa cunsuriyad noqon karta, sidoo kale marka qofku si ogaan ah u qaldo ama si kale u yidhaahdo jinsiyada, da’da ama qaab galmeedka shaqsiga uu la macaamiilayo markaas. Si kastaba ha ahaate cunsuriyadu waa mabnuun oo waxa sheegaya sharciga wadasinnaanta. Sharcigaas waxa uu sidoo kale leeyahay in ay cunsuriyad tahay in qofka la gardaraysto ama la horistaago in uu ka qayb qaato waxa uu doonayo, waxa sidoo kale cunsuriyad ah, in qofka waxaba la ogaysiin waayo ama amar bixin qaldan la siiyo.
Waxa aan macluumaad uruurin ku samaynaynaa cunsuriyadda lagu hayo dadka leh jinsijada afrikaanka
Xilhayaha xafiiska wadasinnaanata ayaa macluumaad uruurin u isticmaalaya foomkan, si loo ogaado cunsuriyada lagu hayo dadka leh jinsiyada afrikaanka ee ku nool Finland. Macluumaad uruurinta waxa sal u ah, in codsigan la buux buuxiyo oo dadka ka tirsian jinsiyada afrikaanka ee la cunsiriyadeeyey ama midabtakoor loo gaystay ku qoraan dhibka haysta. Foomakan waad buuxin kartaa, xitaa hadii aanad dareemeen in lagu cunsiriyadeeyey ama arin cunsuriyad ku saabsan aanad hore dood uga furin. Macluumaad uruurinta waxa aanu diirada si gaar ah ugu qabanaynaa cunsuriyadda ka dhacda goobaha shaqada iyo waxbarashada. Cunsuriyadda dhinaca shaqada waxa loola jeeda, marka aad shaqo dalbato ama waraysiga shaqada marayso, ama shaqada lagaa eryo bilaa sabab. Waa qalad in arimahaas cunsuriyad dardeed lagugu sameeyo. Cunsiriyadda dhinaca waxbarshadana waxa la odhan karaa, marka tusaale ahaan cunsurinimo darteed lagugu gardaraysto ama marka aad boroseeska arday-qaadashada marayso in lagu cunsuriyadeeyo. Ama tusaale ahaan marka hagaha ama xilhayaha la talinta waxbarshada ardayga uu si cunsuriyadaysan kuula dhaqo.
Sida tan uga jawaab su’aalaha
Ciwaankan internetka ayaad foomka su’aalihisa kaga jawaabi kartaa. Ciwaankani waxa uu shaqaynayaa illaa 12.9.2019–18.10.2019. Waxa aad galaysaa oo aad jawaabtaada ku qoraysaa ciwaankan https://buff.ly/2AaQIto. Foomka waad soo koobiyeen kartaa oo aad buux buuxin kartaa ama iskaan ayaad gelin kartaa oo kadina aad soo dhigi kartaa aalada boostada. Waxa aad foomka ku buuxin kartaa luuqadaha, finishka, iswiidishka, ingiriisiga ama soomaaliga. Looma baanha in aad magacaaga ku qorto foomka. Macluumaad uruurintan si aaminaad leh ayaa loo kaydinayaa, loo rebood bixinayaa oo loona ilaalinayaa. Macluumaad uruurintan najiitada ka soo baxada lagama arkayo shaqsigii ka jawaabay, cidda uu yahay iyo magaciisaba. Rebootka ka soo baxa macluumaad uruurintan waxa lagu kobcinayaa shaqada waxqabadka ee xafiiska. Waxa sidoo kale reboodka lagu isticmaalayaa horumarinta iyo ka hortagga shaqada cunsuriyadda ee xilhayaha xafiiska wadasinnaantu qabto.
Su’aalaha bogga intarnetka